Tutorial Photoshop 5 hampitomboana ny fahaizanao | Famoronana an-tserasera
Tsy misy isalasalana Photoshop io dia mbola ilay rindrambaiko fanovana sary matihanina safidy ho an'ny ankamaroan'ny endrika sary. Vokatr'izany, ho an'ireo izay vao manomboka sy ireo izay efa mampiasa azy, dia te hizara izahay anio Tutorial Photoshop 5 hampitomboana ny fahaiza-manao sy ny famoronana; Izy ireo dia horonantsary nampiantrano YouTube avokoa, ka ho mora ny hahatakatra azy ireo.
Tutorial fitaovana fandoroana. Ity dia lesona fampianarana mampiseho ny fomba samihafa azo ahamaintisana ny faritra samihafa amin'ny sary. Tsy sivana io, fa borosy azo ahitsy amin'ny habeny irina ary hita ao amin'ny boaty Fitaovana Photoshop.
Tutorial ny fomba fampiasana ny fitaovana fanoloana loko. Araka ny voalaza, dia tutorial momba ny efa ho telo minitra izay an-tsipiriany ny fampiasana an'io fitaovana io ahafahana mandoko bebe kokoa na latsaka amin'ny faritra manokana amin'ny sary. Ny fampianarana dia mampianatra ny fomba fanoloana ny loko miorina amin'ny saturation, hue, lightness, na loko.
Fitaovana fanao namboarina. Amin'ity tranga ity, dia tutorial izay manampy anao hahatakatra ny fomba fampiasana ilay fitaovana ampanjifaina endrika, misafidy karazan-karazany maro karazana ary miaraka amin'ny fahafaha-mianatra mampiasa ny toerana samihafa atolotry ny fitaovana, ao anatin'izany ny kapoka na ny mameno.
Fitaovana Dodge. Amin'ity lesona Photoshop ity dia ampianarina antsika hiasa mifantina amin'ny faritra samihafa amin'ny sary, amin'ny fampiasana ny safidy borosy, ny fipoahana, ny halehibeny, ny jiro amin'ny maso, sns.
Afindra ny fitaovan'ny mpamantatra atiny. Izy io amin'ny ankapobeny dia fampianarana fampidirana izay mamaritra ihany koa ny fomba ahafahanao manadihady piksel sy manasitrana faritra tsy ilaina amin'ny sary.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Tutorial Photoshop 5 hampitomboana ny fahaizanao
Kitapo loharanom-pahalalana: sary miisa 908 + 1.973 hisintona maimaim-poana